स्वास्थ्य - नारी
कमलादीकी दुई वर्षीया आभ्यानीका अगाडिका दाँत कीराले खाएको छ । उनको जस्तै समस्या धेरै बालबालिकामा पाइन्छ । दूधे दाँतबारे धेरैमा जानकारी अभाव छ । धेरैले यसबारे केही भ्रम पालेर राखेका हुन्छन् । जस्तो कि दूधे दाँत त हो, झरिहाल्छ नि । त्यस्तै, धेरै अभिभावक स–साना बालबालिकाहरूको दाँत कीराले खाँदा पनि वास्ता गर्दैनन् । सामान्यतया बच्चाहरूका दूधे दाँत छदेखि १२ वर्षको उमेरमा झर्छन् । सकेसम्म १२/१३ वर्षअगाडि कुनै बंगाराका दाँतहरू कीराले खाएमा निकाल्नु हुँदैन । बंगाराका दूधे दाँतहरू उमेर नहुँदै कुनै कारणवश समस्या भएर निकाल्नुपर्ने अवस्थामा त्यसलाई जोगाएर राख्न स्पेस मेन्टेनर बनाएर राख्नुपर्छ । नत्र भने बच्चाका स्थायी बंगाराहरू छ वर्षमै उम्रने हुँदा ती दूधे दाँतहरू निकालेको ठाउँ खाली छ भने दाँत (स्थायी) सिफ्ट हुने हुन्छ । पछि उम्रने नयाँ स्थायी दाँत उम्रने ठाउँमा नपुग्ने गर्छ र भविष्यमा अन्य समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । दूधे दाँतको पनि स्थायी दाँतसरह नै हेरचाह गर्नु अति आवश्यक हुन्छ । भविष्यमा समस्या आउन नदिन बालबालिका दुई वर्ष छँदैदेखि नै दन्त चिकित्सककहाँ कम्तीमा छ महिनाको अन्तरालमा जँचाउन लैजानु वेश हुन्छ । समयमै उपचार गरेमा कम खर्चिलो र बालबालिकालाई सहज हुन्छ । नत्र भने धेरैजसोको दाँत दुख्ने समस्या लिएर मात्र आउने हुँदा जरादेखि भर्नुपर्ने हुन्छ । जरादेखि भर्दा लाटो हुने सुई दिएर गर्नुपर्ने हुँदा बालबालिकालाई पीडा र डर हुन सक्छ । दुई–तीन पटक गरी गर्नुपर्ने हुँदा बालबालिकाहरू झन्झट मान्न सक्छन् । यी सबै समस्याबाट मुक्त हुन बालबालिकालाई दुई वर्षको उमेरदेखि दुई–तीन मिनेटसम्म फ्लोराइडयुक्त दन्त मञ्जनले दिनमा दुईपटक अनिवार्य ब्रस गराउने बानी बसाल्नुपर्छ । त्यसका साथै जुन खानेकुरा खाए पनि पछि कुल्ला गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । सानो बेलादेखि राम्रो बानी बस्यो भने पछिसम्म आफ्नो दाँतको हेरचाह आफैं गर्ने बानी बस्छ । बालबालिकाको दाँत स्वस्थ बनाउन खानपानमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । खानेकुरामा सकेसम्म क्याल्सियमको मात्रा धेरै भएको दूध, दही, पनीर, चीज आदि समावेश गर्दा वेश हुन्छ । जंक फुड सकेसम्म नखुवाउने र फाइबरयुक्त खाना बढी खुवाउँदा दाँत बलिया र स्वस्थ हुन्छन् । साथै भिटामिन ‘सी’ युक्त खाना खाँदा गिजा बलिया हुने हुँदा फलफूलहरू पनि प्रशस्त मात्रामा खुवाउँदा वेश हुन्छ । गुलियो पदार्थले दाँत छिटो कीराले खाने र चिसो पेय पदार्थले दाँतको इनामेल खियाउने हुँदा सकेसम्म बालबालिकाहरूलाई त्यो धेरै नखुवाउँदा राम्रो हुन्छ ।दूधे दाँत कीराले खाएको छ भने पछि उम्रने दाँत पनि कमजोर भएर उम्रन्छन् र छिटो कीराले खान सक्छ । त्यसैले आफ्ना बालबालिकालाई राति दाँत माझ्ने बानी बसाल्नुपर्छ । (डा. शाक्य पाटनढोकास्थित लुमन्ती डेन्टल क्लिनिककी संचालिका हुन् ।)
ठूलो आन्द्राका कोषिकाहरू अनियन्त्रित भई विभाजित हुनु नै ठूलो आन्द्राको क्यान्सर हो । संसारमा क्यान्सरले मृत्यु हुनेमा यो रोग फोक्सोको क्यान्सरपछि दोस्रो नम्बरमा र सबैभन्दा धेरै पहिचान हुने क्यान्सरमा तेस्रो नम्बरमा पर्छ ।
नारी संवाददाता , वैशाख २८, २०७९
के हो बुद्धि बंगारा ?
बुद्धि बंगारा साधारणतया १७ वर्षदेखि २५ वर्षमा उम्रन्छ । यो दाँत उम्रदा धेरै मानिस वयस्क अवस्थामा पुगेर बुद्धि छिप्पिसकेका हुन्छन् । त्यसैले यसलाई बुद्धि बंगारा भनिन्छ ।
डा. रीना शाक्य, वैशाख ६, २०७९
हामीले छुटाउनै नहुने खाद्यवस्तुहरू मेथी, कागती, बिमिरो र पुदिना (बाँवरीको पात) हुन् । यी खाद्यवस्तुमा पाइने पोषण र खनिज तत्वहरूले मानव स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छन् ।
डा. अरुणा उप्रेती, चैत्र १४, २०७८
महिलामा देखिने क्यान्सर
क्यान्सर रोग लाग्नबाट बच्न महिलाले प्रत्येक वर्ष अन्य जाँच गरेजस्तै स्तनको मेमोग्राम र पाठेघरको मुखको जाँच जसलाई प्यापस्मेयर गर्नुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनले स्वच्छ हावा, पानी, पोषिलो खाना, वासस्थानलगायत व्यक्तिका आधारभूत आवश्यकतामा नकारात्मक असर पारेको छ । यी आवश्यकताहरूमा व्यक्तिको पहुँच फरक–फरक भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावको सामना हरेकले ढिलोचाँडो गरेकै हुन्छन् ।
नारी संवाददाता , चैत्र ९, २०७८
कोरोना संक्रमणका कारण गर्भवती तथा उनको गर्भे शिशुमा पर्नसक्ने असरबारै यथेष्ट मात्रामा अध्ययन–अनुसन्धान भइसकेको छैन । तर पनि विश्व परिवेशका पछिल्ला अनुसन्धानका नतिजाअनुसार यो संक्रमण गर्भवतीबाट गर्भे शिशुमा खासै सरेको देखिँदैन ।
नारी संवाददाता , फाल्गुन १२, २०७८
प्रायः पात, बियाँ र बोक्रालाई हामीले बेवास्ता गर्छौं । तर, यसमा लुकेको सूक्ष्म पोषकतत्वको प्रयोगले महिला स्वास्थ्यमा राम्रो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा विभिन्न अनुसन्धानले सिद्ध गरिसकेका छन् ।
डा. अरुणा उप्रेती, माघ १७, २०७८
९९ प्रतिशत पाठेघरको मुखको क्यान्सर एचपीभी (ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस) का कारण हुन्छ ।
नारी संवाददाता , माघ १६, २०७८
बालबालिका र दाँत
आमाको दूधले सिधै ‘क्याभिटी’ गराउँदैन । आमाको स्तनपानसँगै छ महिना नाघेपछि बच्चाले अन्य गुलिया खानेकुरा खाएर मुखमा एसिडिक वातावरण सिर्जना भयो र मुखको सरसफाइमा ध्यान नदिएपछि मात्र कीरा लाग्छ ।
नारी संवाददाता , पुस २३, २०७८